सामुदायिक विद्यालयले निजीसँग सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् | Aaja ko Shiksha
प्रधानाध्यापक, श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्राम, सुर्खेत
अन्य सामुदायिक विद्यालयको भिडमा श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण माविलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?
यो विद्यालयले आफ्नोे मिहिनेत, फरक अभ्यास, निरन्तरको उत्कृष्ट नतिजा, जनचाहनाबमोजिम प्राविधिक शिक्षा, संस्कृत, नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण सिकाइ, उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधारलगायतले मध्यपश्चिममा नै फरक पहिचान बनाउन सफल रहेको छ । यो विद्यालय खुल्ने, पढाइ हुने र बन्द हुने, समय तालिका अनुसार हुने गर्छ । पठनपाठनमा कुनै घण्टि खाली हुँदैन, यदि खाली भयो भने कक्षा मनिटरले शैक्षिक प्रशासनमा जानकारी पठाउँछ, विद्यालयमा जुन शिक्षक उपलब्ध हुनुुहुन्छ खाली कक्षामा जानुहुन्छ । यदि शिक्षक उपलब्ध नभएमा विषयगत तयारी अवस्थामा बसेका जान्ने समूहका विद्यार्थीबाटै सहजीकरणको व्यवस्था मिलाइन्छ । उनीहरुको समय खेर जाँदैन । साथै, हाम्रो विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म प्रत्येक कक्षाका एक–एक सेक्सन अङ्ग्रेजी माध्यमबाट समेत पठनपाठन हुन्छ । यस आधारमा यो अरुमा सामुदायिक विद्यालयभन्दा फरक छ । समग्र विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि ५७ प्रतिशत रहेको छ । १ देखि १२ कक्षासम्म १७७८ विद्यार्थी र उनीहरुका लागि ३४ जनाको शिक्षक समूह कार्यरत छ । विज्ञान विषयका हरेक संकायका छुट्टा–छुट्टै प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय अन्यमा भन्दा उत्कृष्ट छ ।
विद्यालयका राम्रा अभ्यासहरु के–के छन् ?
मैले अघि नै भनिसके नि, विद्यार्थीले कक्षा खाली हुन दिँदैनन् । उनीहरुले प्रत्येक कक्षामा विषयगत मनिटर बनाएका हुन्छन् । जुन विषयको शिक्षक अनुपस्थित हुन्छन् त्यो घण्टी विषयगत मनिटर आफैंले सहजीकरण गर्छन् । प्रार्थना समयमा विद्यार्थीले प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँछन् । कुनै दिन जुन विद्यार्थी कक्षामा उपस्थित हुँदैन, उसबाट मनिटरले हर्जाना उठाउँछन् र कक्षाको कोषमा राख्छन् । यो सञ्चित कोषले शुक्रबारीय वा अन्य कार्यक्रम आयोजना गरी पुरस्कार व्यवस्था मिलाउँछन् । विभिन्न हाउस अनुसार वातावरण सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्छन् । कक्षा ६ देखि १२ सम्म अङ्ग्रेजी र नेपाली दुबै माध्यममा पढाइ गर्ने गरिएको छ भने संस्कृत माध्यमबाट समेत अध्यापन गर्ने अवसर छ । कमजोर विद्यार्थीका लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन, विभिन्न सुधारात्मक परीक्षा प्रत्येक शिक्षक अनिवार्य पाठयोजनासहित कक्षामा जाने र विशेषगरी कक्षा १० को एसइइ परीक्षाको तयारीका लागि अभिभावक र विव्यसको समन्वयमा बिहान–बेलुका अतिरिक्त तयारी कक्षा सञ्चालन गरिँदै आइएको छ । प्रशासनिक सहजताका लागि हरेक कक्षा सिसिटिभिबाट निगरानी गर्ने, विद्यार्थी भागेमा वा अनुपस्थित रहेमा अभिभावकलाई सूचना गरी जानकारी लिने र नियमित बनाउने प्रयत्न गरिने, कक्षा ६ देखि माथिका विद्यार्थीलाई अभिभावक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमतिमा वर्षमा एक पटक विभिन्न क्षेत्रको शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा लगिँदै आएको छ । हामी पाठ्यपुस्तक केन्द्रित सिकाइभन्दा माथि उठेर पुस्तकालय, खुला वातावरण, इन्टरनेट आदिलाई सिकाइको माध्यम बनाउने गरेका छौं ।
विद्यालय राम्रो बनाउन कस्ता प्रयास भएका छन् ?
हामी सामूहिक कार्यमा विश्वास गर्छौं । सामूहिक योजना निर्माण, कार्य–विभाजन, कार्यान्वयनमा सामूहिक प्रयास गर्ने गर्दछौं । हरेक काम सामूहिक निर्णयको आधारमा गर्ने गर्छौं । हामी पठनपाठन सुधारलाई नै मुख्य जोड दिँदै आएका छौं । विद्यार्थीको अनुशासनमा सुधार ल्याउन सिसिटिभि जडान गरिएको छ । सिकाइ अभिवृद्धि गर्न पाठगत, साप्ताहिक, मासिक परीक्षा लिने गरेका छौं । अभिभावकलाई महिनामा एकपटक विद्यालयमा भिजिट गर्न अनुरोध गरिने गरिएको छ । साथै, बालबालिकाका बारेमा भएको प्रगति वा केही टिप्पणी भएमा परामर्श पुस्तिकामा उल्लेख गर्न लगाउने गरिएको छ । विद्यालयले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष देखिएमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड दिइँदै आइएको छ । हामी अभिभावकको चाहना अनुसारको समयसापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको अवस्था छ ।
तपाईँको विचारमा सामुदायिक विद्यालयका खास समस्याहरु के–के हुन् ?
समस्या धेरै छन् । समस्या मात्रै हेर्दा समस्या नै देखिन्छ । त्यसलाई अवसरको रुपमा हे¥यौं भने अवसर नै अवसर देखिन्छ । मुख्यतः सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो गर्ने, सुधार गर्ने इच्छा शक्तिको कमी भएको जस्तो लाग्छ । समस्या नभएको भने होइन । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नमिलेको देखिन्छ । कुनै ठाउँमा शिक्षक बढी विद्यार्थी कम देखिन्छ भने हाम्रा जस्ता शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक आधा मात्र उपलब्ध छन् । अर्को कुरा आर्थिक अभावमा गुज्रिएका सामुदायिक विद्यालयमा भवन, कक्षाकोठा, कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रोजेक्टर आदि जस्ता भौतिक पक्षको अभाव देखिन्छ । तर, समस्या देखेर डराउनु भएन । समस्यालाई अवसरको रुपमा लिँदै सुधारको बाटोमा अघि बढ्न जरुरी छ ।
सरकारको ठूलो लगानीका बाबजुद सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कम देखिन्छ । यसको कारण केलाई मान्नुहुन्छ ?
लगानी मात्रै भयो अनुगमन र सुपरीवेक्षण भएन । दण्ड र सजायको व्यवस्था नहुँदा छाडातन्त्र भयो । राम्रो गर्नेलाई हौसला र नगर्नेलाई दण्ड प्रेरणा दिने काम भएन । शिक्षकहरु बढी राजनीतिसँग गाँसिए । उनीहरुलाई आवश्यकताअनुसार पार्टीले प्रयोग गर्ने र संरक्षण दिने काम गरे । हो, त्यस्तै विद्यालयको नतिजा पनि खस्किएको देखिन्छ । सचेत मानिसले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने सोंच बनाएको देखिँदैन । समुदायले चासो नदिएपछि गुणस्तर खस्कनु स्वाभाविक नै हुनजान्छ । शिक्षण पेशालाई जागिरको रुपमा मात्रै लिने प्रवृत्ति, दलीय हस्तक्षेप, समुदायको वेवास्ता, सरकारी अनुगमनको कमीलगायतका कारण केही सामुदायिक विद्यालयहरु धराशायी बन्दै गइरहेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयले समुदायको विश्वास आर्जन गर्न किन नसकेका होलान् ?
समुदायको चाहना र शिक्षाप्रतिको बुझाइ फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । हाम्रा विद्यालयहरु भने पुरानै ढर्रामा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । पहिले पो विकल्प थिएन जे गरेपनि हुन्थ्यो अहिले निजी विद्यालयहरु विकल्पको रुपमा आइसक्दा पनि विद्यालयहरुले आफुलाई रुपान्तरण गर्न सकेनन् । सरकारले पनि सोही अनुसारको नीति ल्याउन सकेन । हाम्रा विद्यालयहरु उही पुरानै ढर्राका भए तर समुदायको आवश्यकता र चाहना नयाँ भइदिए । त्यसैले उनीहरु निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित हुन थाले । अंग्रेजी माध्यम निर्विकल्प भइसक्यो । अझै विद्यालयहरुमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक पु¥याउन सकिएको छैन । शिक्षकहरु पढाउन, परिस्कृत हुन चुके, सरकारीे भूमिका फितलो भयो, सम्पन्न र सचेत अभिभावकले छोरा छोरी बोर्डिङहरुमा पठाए । कम आर्थिक अवस्थामा रहेका सामान्य परिवारका बालबालिका मात्र सरकारी विद्यालयमा आए । उत्कृष्ट विद्यार्थी छानी–छानी निजीले लगे, बाँकी रहेकालाई फकाइ÷फुलाई सामुदायिकमा ल्याइयो, घरमा राम्रो शैक्षिक वातावरण भएका बालबालिका निजी बोर्डिङतिर गएपछि विद्यालयको उपलब्धि राम्रो हुने भयो । जुन विद्यालयको उपलब्धि कम हुन्छ, त्यसमा अभिभावकको विश्वास घट्ने नै भयो ।
सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएला ?
सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई राज्यले सबै क्षेत्रमा पहिलो अवसर दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । शिक्षासम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय पनि कर्मकाण्डी हुनु भएन । विनि, स्रोतव्यक्ति विद्यालय निरीक्षण गर्न जाँदा प्रशासनिक निरीक्षण गरेर मात्र होइन, नवीन विधि प्रयोग गरी नमूना शिक्षण गरेर सहयोग गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । शिक्षकलाई विद्यालयले कक्षामा आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउन सकेमा निजीसँग सामुदायिक विद्यालयले सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । यसका साथै विद्यालयको शैक्षिक वातावरण विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ । निजीलाई गाली गर्नुको साटो सामुदायिक विद्यालय सुधारमा लाग्नु पर्छ । सामुदायिक राम्रो बन्दै गए निजी आफैं बन्द हुन्छन् ।
सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा समुदायको कस्तो भूमिका रहला ?
सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्ने भनेकै समुदायले हो । आजभोलि धेरै सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक भेला गराउँदा पनि उनीहरुको उपस्थिति देखिँदैन । यो कार्यमा समुदाय नै नतातेसम्म शिक्षक केवल घडीको सुई जस्तो यन्त्रवत् चल्छ । दश बजे स्कूल आउँछ, साँझ ४ बजे घर फर्कन्छ । यसबाट कुनै उपलब्धि हुँदैन । यस आधारमा हेर्ने हो भने विद्यालय सुधार गर्ने भनेकै समुदायले हो भन्नुपर्ने हुन्छ । जनता भनेकै सरकार हो । समुदायले आपूm स्थानीय नियमन गर्ने सञ्चालक भएको बिर्सिएको छ । समूदायले चाहेमा पक्कै सामुदायिक विद्यालयको सुधार हुनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा नेतृत्वको कमी भएको हो ?
सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व कमी भएको होइन । तहगत तालिम प्राप्त योग्य शिक्षकले नेतृत्व गर्नुभएको छ । बरु, हाम्रो इच्छाशक्ति कम भएको हुन सक्छ ।
शिक्षक तालिम कक्षाकोठामा पुगेको लाग्छ त ?
शिक्षकका तालिम कक्षा सुहाउँदो छ कि बोझिलो छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । तालिममा जे सिकिन्छ, त्यही कक्षाकोठामा लागू गर्नेभन्दा पनि कक्षाकोठामा पढाउने पाठले जे मागेको छ, त्यो अनुसार ढाले तालिमको उपयोग गर्नु पर्छ । शिक्षणमा आइसिटी प्रयोग गरी शिक्षण गर्ने भनेर तालिम लिएको शिक्षकले साधन–स्रोत नभएको विद्यालयमा शिक्षण गर्नु परेमा तालिम कक्षाकोठामा कसरी प्रयोग हुन सक्छ र ! तर पनि हाम्रो विद्यालयमा सम्भव भएसम्म तालिममा सिकेका, अन्य विद्यालयहरुबाट सिकोका, इन्टरनेटबाट सिकेका शिक्षण सीपहरु कक्षाकोठामा पु¥याउने प्रयास गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारको शुरुवात कहाँबाट गर्नुपर्ला ?
सुधार स–साना कमजोरी सुधार गर्न सकियो भने शिक्षामा सुधार हुँदै जान्छ । हाम्रा केन्द्र विद्यार्थी हुन् । तिनीहरुको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने सिकाइ सहजीकरण र विद्यार्थीको उपलब्धिलाई बढाउन सकिने क्रियाकलापबाटै सुधारको शुरुवात गर्नु पर्छ । उनीहरुलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गराउन सक्नु पर्छ । बालबालिकाको मन मस्तिष्कमा सिक्ने भोक जगाउन सकियो भने सुधारको शुरुवात त्यहीँबाटै हुन्छ ।
सिकाइ र भौतिक पूर्वाधारको कस्तो सम्बन्ध रहन्छ ?
सिकाइलाई भौतिक पूर्वाधारको सुप्रबन्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । हाल शिक्षणका लागि उपयोग हुने विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न बिजुली, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर, ल्यापटप र सामग्री प्रदर्शनका लागि उपयुक्त कक्षाकोठा शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पर्छन् । यसकारण सिकाइ र भौतिक पूर्वाधारबीच निकटतम सम्बन्ध रहेको हुन्छ । तर, भौतिक पूर्वाधार नै सबै थोक होइन । इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हो ।
अन्य सामुदायिक विद्यालयहरुलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक आफैं घण्टी अनुसार समयको बचत गरी पूरा तयारीका साथ उद्देश्य बनाएर कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने र पूरा समय विद्यार्थी केन्द्रित विधिका माध्यमबाट शिक्षण गर्न सके अरु सुधार छिट्टै देखिनेछ । कक्षाकोठामा उत्साह बोकेर जाने शिक्षकले पक्कै पनि केही बालबालिकाको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आधार तयार पार्न सक्छ । त्यसैले, विद्यालयको शैक्षिक बालमैत्री, शिक्षण बालकेन्द्रित विधिमा, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन, विद्यार्थीका आनीबानी सुधार, आचारसंहिता उनीहरुबाटै अभिभावकका आचारसंहिता अभिभावकबाटै शिक्षकका आचारसंहिता शिक्षकबाटै बनाउन लगाउने र कार्यान्वयन गर्न लगाउने हो भने विद्यालयको शैक्षिक उन्नतिमा अवश्य परिवर्तन आउनेछ ।
यस विद्यालयको अबको योजना के छ ?
विद्यालयमा भर्नाका लागि विद्यार्थीको बढ्दो चाप ओइरिरहन्छ । अभिभावहरुलाई हात जोडेर तपाईँको बालबालिका अन्य स्कूलमा लैजानुस् भनेर अनुरोध गर्नु पर्छ । त्यसका लागि अब थप भौतिक बिस्तार गर्ने, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था मिलाउने योजना छ । शिक्षाको जिम्मेवारी अब स्थानीय निकायमा आएको छ । यसको अनुभूत हुने काम नगरपालिकाले हाम्रो जस्तो सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गरेर पूरा गराउने योजना छ । यस वर्षदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सिभिल सब ओभरसियर (१८ महिने कार्यक्रम) सञ्चालन गर्ने योजना छ ।